FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA PITSKY DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Pitsky Dog
American Pit Bull Terrier / Husky Siberia na Alika Husky Alika mifangaro
Fangaro mix Lugz the Pit Bull / Husky amin'ny 10 volana. 'Ity i Lugz, Siberian Husky, folo volana, niampita tamin'ny Pit Bull manga. Ny ray aman-dreny dia purebred. Milanja 62 pounds miaraka amin'ny tendany 22 santimetatra ary loha 21 santimetatra. Mahalana ihany koa i Lugz no mivovo, tia ankizy, mbola tsy nanaikitra ary nilalao tsara tamin'ny alika hafa amin'ny habe rehetra. Tena mpihaino tsara izy ary tsy manontany tena. Tena tsara ny asany amin'ny fiambenana ny trano. Tiany ny manenjika serfa ary mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha lavitra be lavitra. Tiany ny hatsiaka ary tsy raharahany ny hafanana. Mila farafaharatsiny izy 2 ora ny fotoana filalaovana isan'andro mba hitazomana azy tsy hahazo faniriana handavaka. Tiany mena vaovao no tiany. '
Ny alika Pitsky dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny American Pit Bull Terrier ary ny Husky Siberia na Alaskan Husky . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Siren the Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) alika kely amin'ny 4 volana
Neeko the Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) amin'ny 1 taona sy tapany— 'Neeko dia tena fikojakojana fatratra dia maniry karazana fiheverana sy finiavana vaky ny trano raha avela irery mihoatra ny minitra vitsy. Tony tokoa izy matetika ary tsy sanatria masiaka hafa noho ny mandritra ny lalao. Milanja 80 pounds izy ary mirefy 45 santimetatra hatramin'ny orona ka hatramin'ny rambony. '
Neeko the Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) amin'ny 1 taona sy tapany
chihuahua / jack russell terrier mix
Jaxx ilay mifangaro manga Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) amin'ny 3 taona— 'Nahita an'i Jaxx izahay tamin'ny alàlan'ny Craigslist. Tena afaka izy, ka nanana ny fisalasalana izahay. Rehefa nihaona tamin'ny ray aman-dreniny izahay dia nahalala tsy ela fa nanangona entana izy ireo ary nitodi-doha Avaratra hahazoana asa vaovao. Namaly ny fandefasana azy avy hatrany izahay, ary nankany an-tranon'izy ireo raha vantany vao nidina ny telefaona izahay. Rehefa nentina nitety ny trano i Jaxx, dia nanao tadiny ho an'ny sakaizako izy. Fatorana tsy azo ampitahaina hatrizay! Jaxx dia feno fahononam-po, hafa noho ny fironana tsindraindray ho faly sy hitsambikina amin'ny olona. Tena tsara fitondran-tena amin'ny alika hafa izy, na dia ny bitika kely aza, ary tiany ny fifandraisana ara-tsosialy amin'ny alika, ankizy ary olon-dehibe. Mifanaraka tsara amin'ny saka ataonay izy, izay hitanay tsy ela taorian'i Jaxx. Manana endrika mahia sy hozatra i Jaxx ary voajanahary ny volony. Mirona hihinana mandritra ny andro izy, nefa tsy dia minomino. Tsy mivoraka izy, raha tsy asaina miteny, ary crate voaofana rehefa nandray azy isika. Tiany ny kilalao ary ananany betsaka! Tsy nahy namboarina indray i Jaxx tamin'ny zavatra nolazain'ny fianakaviany taminay. Ny reniny, Pit purebred, dia nihady tao ambanin'ny vata ivelany ho an'ilay teo akaiky teo izay niandry azy ny dadan'i Jaxx, Husky iray madio. Ny reniny maty rehefa avy niteraka . Mino aho fa tsy misy afa-tsy alika kely telo izay velona. Tena mampalahelo izany, saingy tsara vintana izahay manana azy! '
Jaxx ilay mifangaro manga Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) amin'ny 3 taona ambony ambany eo am-pandriana
'Ity no sary nalaiko tamin'ny mixer Siberian Husky / Pit Bull 8 volana, Molly. Alika fialofana i Molly izay novonjenay fony izy tokony ho 3 volana. Somary saro-kenatra / skiddish izy rehefa vao mifanena amin'ny olona, ​​saingy mafana be izy. Amin'ny alika anefa, izy no namany akaiky indrindra. Tiany ny milalao alika hafa. Molly dia manana fifehezana hyper / mavitrika . Afaka mihazakazaka mandritra ny ora maro izy ary mbola vonona amin'ny zavatra rehetra. Ny kilalao ankafiziny dia ny karazan-kazo rehetra ary tiany ny mandray hazo na mitsambikina ho azy ireo raha mihazona azy ireo ambony ianao. Nandritra ny fotoana kelikely, tsy nety nivily izy, fa izao kosa miteny isaky ny misy olona liana. Ny quirk mahafatifaty ananany dia ny fomba anaovany hodi-kazo , na izany aza. Tahaka ny tsy maintsy hanatanterahany izany ary hataony ireo hodi-tenda kely ireo. Raha ny fahazaran-dratsy hatrany dia mpitrandraka izy. Tia mitsako be koa izy ary ny ankamaroan'ny mitsako kilalao mahazo tomany izy mandritra ny ora maromaro. Tsy hoe manao fanatanjahan-tena be fotsiny izy fa mila be dia be koa. Amin'ny ankapobeny, i Molly dia alika mahafinaritra ary olon-tiana toy izany. Tsy mbola nampiasa Bark Busters mihitsy aho ary raha nijery fizarana vitsivitsy tamin'ny Dog Whisperer, saingy tsy mbola nampiasa ny filozofiany hampiofana an'i Molly aho. '
Bella the Pit Bull / Husky afangaro alika kely 2 volana— 'Ity i Bella, ny fangaronay Husky / Pit. Manodidina ny 2 volana izy izao. Alika mahatalanjona izy. Tena marani-tsaina sy mahafatifaty araka ny hitanao amin'ny sary! Mino mafy aho fa ny mutts / mixes dia alika tsara kokoa avy eo purebred ary tsy misy hafa amin'izany. Hendry izy ary tena tia milalao. '
mixer spaniel mini poodle
Bella the Pit Bull / Husky afangaro alika kely amin'ny 2 volana
Bella the Pit Bull / Husky afangaro alika kely 2 volana
Hijery ohatra hafa momba ny Pitsky
Sarin'ny alika Pitsky 1
Sarin'ny alika Pitsky 2
sarin'ireo mpiandry ondry alemana fotsy
mampiseho ahy ny sarin 'ny omby mastiff alika
husky pitbull mifangaro amidy
Jack Russell pomeranian Chihuahua Mix
lisitry ny alika abidia
shar pei afangaro pitbull